Momba anay - Changzhou Kede Netting Co., Ltd.
Profile Copmany | Kolontsaina | FITAOVANA
Niorina tamin'ny taona 1958, Changzhou Kede Netting Corporation dia matihanina manao karazana harato rehetra. Ny vokatra lehibe ataonay dia harato fanohanana voninkazo, harato manohitra ny vorona, harato voaloboka, harato masoandro, harato manohitra ny rivotra, harato manohitra ny biby, sns. .
Kede dia manana fitaovana famokarana mandroso izay nafarana avy any Alemaina. Mifanaraka amin'ny iraka mihazakazaka ny mpanjifa voalohany indrindra sy ny laza, ary ny politikan'ny fahafaham-po anao dia ny fikatsahantsika. Kede dia manolo-tena hanome mpanjifa vokatra tsara, serivisy tonga lafatra ary fandefasana haingana amin'ny vidiny mifaninana.
Manana rafitra fitantanana kalitao feno sy siantifika ny orinasa.
Ny tsy fivadihantsika, ny tanjatsika ary ny kalitaon'ny vokatra dia ekena betsaka amin'ny indostria.
Ny orinasa dia mifikitra amin'ny fampiasana ny fitaovana vaovao PE avo lenta avoakan'ny entana, mba hiantohana ny tanjaky ny vokatra, ary ny fahombiazan'ny fanoherana ny fahanterana ao amin'ny orinasa.
Ny knots harato voatenona dia voavolavola amin'ny hafanana avo mba hamahana tanteraka ny olana amin'ny slipknot amin'ny harato vita amin'ny tanana na harato PE efa nodiovina, mba hahatonga ny harato tsy mora hirodana sy tapaka.
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia nahatratra ny fenitra ambony indrindra amin'ny tsenan'ny harato fambolena any ivelany.
Naondrana tany Japon, Eoropa ary Azia Atsimo Atsinanana nandritra ny 13 taona, ary noderain'ireo mpampiasa vahiny.
Nandritra ny taona maro, Nahavita zava-bita be dia be avy amin'ny vokatra KEDE ao amin'ny firenena izahay miaraka amin'ny hery ara-teknika matanjaka, ny kalitaon'ny vokatra super ary ny tambajotram-pivarotana mandroso.
Amin'izao fotoana izao, nanangana orinasa vaovao ny orinasa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny orinasa. Amin'ny raharaham-barotra, dia manizingizina ny fanatsarana ny rafitra varotra sy ny fanitarana ny tsena iraisam-pirenena, mba KD vokatra azo zaraina manerana izao tontolo izao.
Amin'ny ho avy, Hikatsaka hatrany isika ary hanao fanatsarana hatrany isaky ny dingana vaovao.